ဝက်နားရွက် အတုတွေပေါ် နေပြီ ဝက်ခေါင်းသုတ်၊ဝက်နားရွက်သုတ်တွေ သတိထား စားကြ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဝက်နားရွက် အတုတွေပေါ် နေပြီ ဝက်ခေါင်းသုတ်၊ဝက်နားရွက်သုတ်တွေ သတိထား စားကြ
ဝက်နားရွက် အတုတွေပေါ် နေပြီ ဝက်ခေါင်းသုတ်၊ဝက်နားရွက်သုတ်တွေ သတိထား စားကြ
Posted by the best on May 17, 2012 in Copy/Paste | 25 comments
အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ရင်နာမည်ပျက်အမြဲထွက်နေတဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ ဝက်နားရွက် အတုတွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတယ် လို့ ရေဒီယို သြစတေးလျ က သတင်းမှ ဒီနေ့ မနက် ကြားလိုက် ရတယ်။
လူတိုင်းအမြန်သိထားသင့်တာမို့ ရေးတင်လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအန္တရယ် ပေးသလဲတော့မသိဘူး။ သိတဲ့သူတွေ ဝိုင်းတင်ပေးကြပါ။
နို့ မှုန့် တုန်းက အတော်ကြောက်စရာကောင်းအောင် အန္တရယ်ပေးခဲ့တယ်။ ဝက်ခေါင်းသုတ်၊ဝက်နားရွက်သုတ်တွေ စားကြတဲ့သူတွေ သိအောင် စုံစမ်းပြီး ဝိုင်းသတိပေး ကြပါ။
ကြေးမုံဂျီးကုမ္မဏီလိမိတက်က ထုတ်လုပ်တယ်လို့ သဒင်းယဘာဒယ်..။
အခုထိတော့ ကြားသေးဘူး … ၀က်ဆိုရင် အသားပဲစားတယ် … နာရွက်ဆိုတော့ လွတ်ပါတယ် … ဟီးဟီး
သတင်းကျေညာသွားတာကလည်း တိုတိုလေးပဲ။ အကြောင်းအရာ ပိုစုံအောင် သိချင် တာကြောင့် အမြန်တင် လိုက်တာပါ။
ဘယ်လို ဘယ်လို ထုတ်လာတဲဟင်.. သိပ်မရှင်းလို့..
တရုတ်က နားရွက်အတုတော့မသိသေးဘူး … လသာမှာဆို … ၀က်အူမ အတု ၊ ကြက်တောင်ပံအတု ၊ ဘဲဥအတု ၊ ငါးအတု ၊ ဆိတ်သားအတု၊ ငါးဖယ်အတု … အို .. တော်တော်များများ အတုရတယ် … ။ ဒါပေမယ့် သူ့အတုက ပဲပြားနဲ့ ဂျုံကို လုပ်ထားတာပါပဲ … အရသာကလည်း စားလို့ကောင်းပြီး ၊ ဈေးကတော့သာမန် အသားငါးဈေးထက်ကြီးတယ် … ။
ဒီက အတုဆိုတာ … စားလို့ ရတာကို .. အတုလုပ်ပြီး သဏ္ဍန်တူအောင်လုပ်ထားတာ …။ ဟိုနိုင်ငံက အတုကတော့ .. စားလို့ မရတာကို .. ပေါချောင်ကောင်းလုပ်ပြီး သဏ္ဍန်တူအောင်လုပ်ထားတာများလား ။
ဘယ်လိုများလုပ်လဲမသိဘူး… သတင်းအပြည့်အစုံလေး တင်ပေးပါလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….
အတုတအားထုတ်ချင်နေတာ…. နောက်ဆို ယောင်္ကျားအတု မိန်းမ အတုတွေပါ ထုတ်မလားမသိဘူးနော်… ဟိဟိဟိ
တရုတ်မ အတုလေး တစ်ယောက်လောက်တော့ လိုချင်သားးးးးးး ခိခိခိ
ကိုရွှေ့ အတွက် ၊ ကုလားမလေးတစ်ယောက် ကို တစ်ကိုယ်လုံး ပေါင်ဒါလိမ်းပြီး ပို့ ပေးမယ်လေ ။
မယားမှတ်ပေါင်းယူမယ် ဆိုရင်ပေါ့ ။ ဟီဟိ
တရုတ်ပြည်က ဝက်နားရွက် ရောင်းတဲ့သူက ရေနဲ့ ဆေး ခြစ် ရာက ဝက်နားရွက် က ကျွဲကော်တွေလိုဖြစ်နေတာ လို့ ပြောတာပဲ။
သတင်းအရ ရွာထဲမှာ စားနေကြသူတွေ ရင် သတိရှိအောင် အန္တရယ်ကင်းအောင် အမြန်တင်တာပါ။
အသေးစိတ်ကို ကျွန်တော်လည်း သိချင်နေပါတယ်။
နို့ မှုန့် ကိစ္စ လိုစုံစမ်းနေတယ်ဆိုပဲ။
တော်သေးတယ် ခြေလေးချောင်းသားမစားပါ နား၇ွက်မကလို့ ၀က်ခြေထောက်ဘဲအတုတုထွက်ထွက်ပါ တို့ကလွတ်တယ် ခြေလေးချောင်းသားမစားလို့ဘဲ
တလုပ်ပြည်က ၀က်ဝယ်စားရလောက်အောင်တော့ တားတားတို့ ဆီမှာ သားငါး မရှားပါးသေးပါဘူးဗျား
စိတ်မပူနဲ့..အဝေးကြီးပါ
မီးက ၀က်ဆို နာရွက်ပဲကြိုက်တာ ဆိုတော့ …
တရုတ်ပြည်က ထွက်တဲ့အစားအသောက်တွေ ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေကိုသုံးရမှာ လန့်လာပြီ ……. ဟိုတစ်လောကလည်း ကလေးအသားနဲ့အားဆေးလုပ်ပြီး ကိုရီးယားကိုပိုတယ်ဆိုလား အဲသတင်းကြားမိသေးတယ် …… ဖလား ဖလား
ဒီသတင်းက တရုတ်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာလဲ တော်တော်ဟော့ ဖြစ်နေတယ်
အတုထွက်တယ် မကြားမိဂျဝူးလား ဟင်င်င်င်
သများ ဥကြောင်ကြီး နဲ့ လုရတာ …စိတ်လေလာလို့ဘာ ….
May. 16, 2012 12:43AM PDT
Police in China are investigating after the discovery ofabatch of “fake” pigs’ ears reportedly made from gelatin, according to state media.
In the latest food safety scare to hit the country, the bogus ears were discovered inamarket in Ganzhou city in the eastern province of Jiangxi in late March afteracustomer complained ofastrange smell when cooking them, the state-run China Daily newspaper reported.
Food safety officials tested the “ears” and found they had been made from gelatin and the chemical sodium oleate, commonly used in the production of soap.
Photos circulating online showed local officials examiningabox of the fake ears, which appeared light-brown in colour and to haveaplastic-like texture.
The China Daily quoted an expert as offeringasure-fire method for telling real ears —apopular delicacy — from fake ones, saying the genuine article should have hair and small blood vessels.
The investigation into the fake ears comes as authorities launchedaprobe into vegetable sellers in the eastern province of Shandong for spraying cabbages with the harmful chemical formaldehyde to keep them fresh.
And in 2008, milk was at the centre of one of China’s biggest food safety scandals when the industrial chemical melamine was found to have been illegally added to dairy products to give the appearance of higher protein content.
တော်သေးတယ် နားရွက်ဆို ဘာနားရွက်မှမစားဘူး
အင်းနားရွက်တော့ကြိုက်ဖူး…..လျှာကိုကြိုက်တယ်။ ၀က်လျှာတုထွက်တယ်လို့သတင်းရရင်လည်း ဝေမျှပါအုန်းနော်
အဲဒါကတော့ ရွာထဲက ကိုပေတို့ ဗိုက်ကလေးတို့ သတိထားကြပေရော့…. ကိုပေက ဗီယာနဲ့ နားရွက်သုတ်ဆိုလွှတ်ကြိုက်တာ…။ ဗိုက်ကလေးက ဘီအီးနဲ့ ၀က်နားရွက်သုတ်ချည့်မြည်းတာ………
ကျေးဇူးပဲ သူကြီး ရေ။
အခုလို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ပေးတာ ဟာ
ရွာသားတွေကို ဂရုစိုက်တဲ့ စေတနာကို သက်သေပြတာပဲ။
တို့ကတော့ ဝက်သားလည်း မစားဘူး ..
ဝက်နားရွက်လည်း မစားဘူး …
ဗိုက်ပြည့်နေတဲ့ အချိန် ပြောပါဒယ် ….
ခုလို သတိပေးတာ ကျေးကျေးပါ ..